बीपीका रोचक प्रसंग: चन्द्रलाई जिस्काउँदा सर्वस्व हरण, ऋण लिएर विवाह
पुस १६, २०७६, बुधबार
काठमाडौँ । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला(बीपी कोइराला) को योगदानको जति चर्चा गर्दा पनि कमै हुन्छ। देश र जनताप्रति राख्नुभएको प्रेम र सद्भावका कारण उहाँले कठोर संघर्ष गर्नु परेको थियो। त्यो...
सागमा नेपालको स्वर्ण इतिहासः पहिलेदेखि अहिलेसम्म क-कसले जिते ? (सूचीसहित)
काठमाडौँ । १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा नेपालले अहिलेसम्म ५१ स्वर्ण हात पारेको छ । अहिलेसम्म भएका सागमा नेपालले यति धेरै स्वर्ण जितेको यो पहिलोपटक हो । दक्षिण एसियाली राष्ट्रको ओलम्पिक मानिने साग प्रति...
काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा विकराल समस्या बन्दै गएको छ, ट्राफिक जाम । ट्राफिक जामका कारण समयमै गन्तव्यमा पुग्न नसक्दा यात्रुहरु आजित बनेका छन् । एक दिन हैन, दुई दिन हैन, प्रत्येक दिन यो समस्या उपत्यकावासीले भोग्नु ...
कास्की । मंसीर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा साझा पार्टीबाट रजनी केसी चुनावी मैदानमा होमिनु भएको छ । केसी लामो समयदेखि समाज रूपान्तरणका लागि सामाजिक, धार्मिक र राजनीतिकरूपमा सक्रिय ...
काठमाडौँ । फिल्म निर्माता, नायक तथा सामाजिक अभियन्ता नवल खड्काले सीमा क्षेत्रका समस्यालाई लिएर दशगजा, सुस्तालगायतका विभिन्न चलचित्र निर्माण गरिसक्नु भएको छ । सीमा क्षेत्रका समस्या नजिकबाट नियाल्नु भएका खड्काले सिमा...
दाङ क्षेत्र नम्बर ३ (ख) : कसले मार्ला बाजी ? यस्तो छ चुनावी अंकगणित
कात्तिक २५, २०७६, सोमबार
दाङ । दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (ख) मा आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको तयारी तिब्र भएको छ। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै उम्मेद्वारले आ–आफ्नो चुनावी प्रचार बढाउनुभएको छ। उक्त निर्वाचन क्षेत्...
काठमाडौँ । आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा धेरैको नजर परेको छ । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी...
नेपाल-भारत सीमा विवाद : सामाजिक सञ्चालमा आक्रोश, सरकार मौन !
कात्तिक २०, २०७६, बुधबार
काठमाडौँ । भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपाली भू-भाग पनि समेटिएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ। शनिबार भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको भू-भाग समेटिए...
प्रवासमा यसरी मनाउँदै छन् नेपालीहरुले दशैँ
असोज १७, २०७६, शुक्रबार
काठमाडौँ । नेपालमा हुनेले दशैं घरमा पुगेर परिवारसँग बसेर मनाउने गर्दछन्। तर प्रवासमा रहेका सबै नेपालीहरु दशैंमा घर फर्किन सक्दैनन्। त्यस कारण पनि उनीहरुको दशैं खल्लो हुने गर्दछ। दशैंमा घर फर्किन नपा...